Ciid | November 2019
Sharoobada Suuriya: dalabka, dawooyinka iyo waxyeelada waxyeelada leh
Editor Ee Doorashada November 16,2019
Ugu Weyn Ee Ciid
Noocyada perlite iyo vermiculite: isku midka iyo kala duwanaanta
Ka mid ah Bacriminta casriga ah ee badan, perlite iyo vermiculite ma aha meel ugu dambaysa ee floriculture indoor. Muddo yar ka hor, dad yar ayaa ogaa suurtogalnimada isticmaalka qalabkaan ujeeddooyinkan, laakiin maanta waxaad si fudud ugu iibsan kartaa dukaanka ubaxa. In kasta oo xaqiiqda ah in perlite iyo vermiculite dhirta ay aad u egyihiin, farqiga ayaa weli jira, iyo hadda waxaan ogaan doonaa kan mid ah.
Sida loo codsado vermiculite for dhirta sii kordhaya
Horumarka caadiga ah ee beeraha wuxuu ku xiran yahay tayada ciidda. Waqti ka dib, hantida ciidda sii xumaaneysa - biyaha iyo hawada uumiga hawada ayaa hoos u dhacda, waxay ku cadaadisaa, adkeysaa. Roots ma helayaan hawo iyo biyo ku filan. Nafaqooyinka la dhaqay, bacriminta ayaa hoos u dhacaya. Dhinaca kale, dusha sare ee dhulka ayaa badanaa dhacaya, marka bacarimis lagu sameeyo Bacriminta macdanta, siyaado dheeraad ah ama tan walax ayaa dhici karta.
Maxaa ka fiican - HOL ama amooniyam, iyo haddii ay tani tahay mid iyo bacrimin isku mid ah
Qofkasta oo koraya khudradda ama dalagyada dhirta ku yaala ayaa fahamsan in ay aad u adag tahay in la koro dalagga deeqsi ah oo aan Bacriminta nitrogen. Nitrogar waa nafaqada ugu muhiimsan ee dhammaan dalagyada, lagama maarmaanka u ah horumarinta degdegga ah ee geedo guga, iyo sidoo kale kordhinta qoyaanka qalafsan ee qalafsan.
Amooniyam: sida loo isticmaalo bacriminta
Qof kasta ma yaqaanno amooniyam amooniyiin, sidaas darteed aynu u eegno bacrimintaan, sidoo kale raadso sida iyo meesha loo isticmaalo. Nitrate ammonium waa bacriminta macdanta macdanta leh ee midab cad oo leh cawl, midab jaalle ah ama casaan, oo leh dhexroor ilaa afar millimitir. Tilmaamidda Nitrate ammonium iyo bacriminta Bacriminta loo yaqaan "ammonium nitrate" - doorasho caan ah oo ka dhexjirta dadka degaanka xagaaga, taas oo ka heshay dalab ballaadhan sababtoo ah joogitaanka ka kooban qiyaastii 35% nitrogen, taas oo aad loogu baahan yahay koritaanka firfircoon ee dhirta.
Waa maxay hydrogel iyo sida loo isticmaalo
Ka dib markii uu ka soo laabtay safar dheer, growers badani waxay ka baqayaan gobolka gobolka dhirta gudaha, taas oo, maqnaanshaha waraabinta, u rogaan herbarium ah. Si arrintan looga fogaado, dhirta koraya oo keliya ee hydrogel ah ayaa caawin doona, taas oo aan ka wada hadli doono hoos. Hydrogel: waxa ay tahay Waa maxay hydrogel, ma aha qof kasta ogyahay, inkasta oo sanadihii ugu dambeeyay walaxdani ay sii kordhisay sii kordhinta beerta.
Earthworms ee beeraha our: guryaha hantida leh, taranta
Doorka dhulka wabiga ee dabiiciga ah iyo nolosha bini'aadamka way adagtahay in la qiimeeyo. Xiddigaha dhulluxaha leh ayaa ah ka qaybgalayaasha aan muhiimka ahayn ee abuuritaanka ciidda bacrin ah, sidaas darteed abuurista cuntada waa hab-nololeedka dadka. Inkasta oo aynaan badanaa ka fekerin, laakiin aan lahayn dhulluubyo, jiritaankeenu waa mid adag.
Qaababka isticmaalka peat sida bacriminta
Kordhay, bannaanka u doorbidaa inaad isticmaasho Bacriminta organic sida feed. Mid ka mid ah waa peat. Si kastaba ha ahaatee, ogsoonow in aysan ku habboonayn carrada oo dhan. Haa, oo codsan bacriminta this waa inay si caqli leh, si aanay u waxyeello dhirta ama dhulka. Ku saabsan waxa ah peat, sida ay u dhacdo iyo sida loo isticmaalo si haboon u isticmaali bacriminta beerta beerta, akhriso qaybaha soo socda.
Sida loo codsado "Azofosku" ee dacha
Maanta mid ka mid ah bacriminayaasha ugu caansan ee loo isticmaalo beeraha waa daroogada "Azofoska". Tani bacriminta macdanta oo dheellitiran ayaa muddo dheer loo adeegsaday beeraha warshadaha oo ballaadhan, waxana sidoo kale lagu dabaqi karaa gadaashiisa yaryar, dhulalka dalka. "Azofoska" - waa maxay?
Sida loo dalbado perlite dhirta
Dhibaatada aadka u badan ee bannaanka u ah ciidda aad u cufan, taas oo si aan macquul ahayn u oggolaan hawada iyo qoyaanka, ka hortagga dhirta ka soo baxa. Agroperlite waxay noqon doontaa badbaado dhab ah kiiskan, hantida iyo codsiga kaas oo aan ka wada hadli doono hoos. Maxay tahay perlite iyo dabeecadeeda Perlite waa ku baahsan tahay beeraha iyo beerta, sidaas darteed qof walba waa inuu ogaadaa waxa uu yahay.
Noocyada Bacriminta macdanta, Magacyada iyo sharaxaada
Bacriminta macdanta waxaa lagu gartaa diirad sare oo nafaqooyin ah. Halabuurka Bacriminta macdanta ayaa laga yaabaa inay ka duwan yihiin, iyo iyadoo ku xiran nafaqada la doonayo waxa loo qaybiyaa si adag oo fudud. Waa muhiim! Bacriminta waa in loo adeegsadaa tiro yar, iyadoo la eegayo heerka nafaqooyinka ee carrada.
Nidaamka bacriminta ee carrada kala duwan: codsiga iyo qiyaasta
Bacriminta dhulka ayaa ah geedi socod muhiim ah oo koritaanka iyo horumarinta dhirta iyo, si waafaqsan, si aad u hesho dalag weyn oo tayo sare leh. Bacriminta - noocyada maaddooyinka loo isticmaalo si loo hagaajiyo xaaladda iyo guryaha carrada. Waxay ku quudiyaan dhirta iyaga oo leh qaybaha kiimikada loo baahan yahay. Waxaa jira noocyada soo socda ee Bacriminta: dabiici ah iyo macaadin (asal ahaan); adag iyo dareer (xaaladda guntiga); ficil toos ah iyo mid aan toos ahayn (qaab ficil); aasaasiga ah, ka hor beerashada, quudinta, hoos udhaca, dusha sare (habka hordhaca).
Shaxda iyo muhiimada aysidhka carrada ee beerta iyo beeraha dalagyada
Waa maxay sida aysidhka ciidda ee beerta u gaar ah, ma aha dhammaan mulkiilayaasha. Qaar badan ayaa la lumiyaa marka la eego qeexin aan la fahmi karin ee pH iyo qiimaha tirooyinka ka dib markii ay ku jiraan baakadaha dukaanka. In kasta oo xaqiiqda ah waa macluumaadka ugu muhiimsan ee ururinta abuurista karti leh iyo mustaqbalka dalagga mustaqbalka.
Waa maxay noocyada ciidda
Wixii beerta iyo ninkii beerta ka shaqaynayay, waxa ugu muhiimsan waa tayada dhulka uu ku yaal. Noocyada kala duwan ee carrada waxaa lagu kala saaraa sifooyinka soo socda: qaab-dhismeedka; kartida ay u gudubto hawada; hygroscopicity; Awoodda kulaylka; cufnaanta; acidity; isdabajooga oo leh waxyaalo yaryar iyo macro, organic. Hirgelinta aqoonta beerta ee noocyada ciidda iyo dabeecadaha waxay kuu oggolaanayaan inaad doorato dalagyada midig ee beerista beerta, soo qaado bacriminta iyo si habboon u qorsheyso geeddi-socodka agrotechnological.
Sida loo nadiifiyo dhulka ka hor beerto geedo
Substrate jeermis dilay - ballanqaad ah caleemaha xoog leh iyo caafimaad leh ee geedo. Sidaas, barta hore ee diyaarinta for abuur beereed. Hawlaha waxaa lagu fulin karaa hababka dadweynaha ama u diyaargaroobida kiimikada ama nafleyda. Si aad u ogaato tiknoolijiyada ku habboon boggaaga, tixgelin hababka ugu caamsan, qiimaha hooseeya iyo siyaabaha waxtarka leh.
Waxaan u isticmaalnaa agroperlite for dhirta sii kordhaya
Beeraha iyo dhirta beeraha si fudud ayaa loo maamuli karaa dhulalka madow ee bacriminta ah, iyo perlite waxay caawin doonaan dadka saboolka ah, xaqiiqda dhabta ah ee aan ku habooneyn soo saarka beeraha. Waa walaxkan oo gacan ka geysanaya kobcinta nafaqooyinka iyo qoyaanka dhoobada iyo subagga dhoobada ah: ka dib marka la soo bandhigo, waxay si khaas ah u kala duwanyihiin kiimikada iyo habdhiska jilicsan ee jilicsan.
Isticmaalidda alaabta daboolka ah ee la isku qurxiyo beerta
Maanta, bannaanka u tiro badan ayaa isticmaala qalab kala duwan oo daboolaya. Hase yeeshee, dad yar ayaa ogaanaya hoyga noocan oo kale ah, oo xitaa markaa, dadku waxay yiraahdaan waxa ay yihiin iyo waxay soo wici doonaan meelaha codsigooda. Isla mar ahaantaana, waqtigu weli ma istaagayo, shirkadaha ayaa si joogto ah u horumariya tayada wax soo saarka, iyaga oo ballaadhinaya suurtagalnimada isticmaalka.
Sida loo qodo dhulka by tractor socda (video)
Mishiinka ama gawaarida yaryar waxa uu noqon karaa kaaliye aan loo baahnayn in beeralay kasta oo yaryar ah dhulkiisa. Uma baahnid in badan oo shidaal ah, waxay qaadataa meel aad u yar, waa sahlan tahay in la shaqeeyo, laguna xalliyo dhowr hawlood oo muhiim ah, mid ka mid ah oo dhulka ku beera. Mini, dhexdhexaad ah ama culus? Si loo beerto rinjiga (tiller) inuu noqdo mid waxtar leh, waa lagama maarmaan in la doorto qalabka saxda ah.
Sida loo demiyo carrada: Talooyin ku saabsan bannaanka u ah
Warshad walba geedka ku beeray, beeritaanka goobta goobta geedka, waa geed, geed ama qudaar, waa in la baaro xaaladda carrada. Maaddaama dalagyada kala duwan ay u kobcin karaan gebi ahaanba hal meel, taasi waxay toos ugu xiran tahay oo keliya bacriminta ciidda, laakiin sidoo kale on acidity. Heer sare oo acidity ah si xun u saameeyaa burburka bacriminta kala duwan iyo oxidizes xididdada dhirta, taas oo si cad u saameeya horumarinta dalagyo badan.
Ka hor intaan la beeri dhirta ama geedaha, waxaa lagama maarmaan ah in la baro ciida carrada ay ugu wanaagsan tahay. In our article waxaan ku sharaxi doonaa sida loo go'aamiyo acidity ee ciidda si madax banaan, maadaama uu yahay tilmaame taas oo uu leeyahay saameyn halis ah horumarinta dalagyada. Noocyada aysidhka Noocsamida dhulku waa mid ka mid ah tilmaamayaasha muhiimka ah ee falanqaynta ciidda.
Waa maxay beerashada carrada: sida loo beerayo dhulka
Dayactirka beerta ama cottage wuxuu ku xiran yahay tiro fara badan oo ah farsamooyinka agrotechnik kala duwan. Qaar ka mid ah waxaa loo isticmaalaa "habraaca gacanta", iyadoo habab badan oo waxtar leh ay la xiriiraan isticmaalka qalabka gaarka ah. Meelaha waaweyn, hababka caalamiga ah ayaa loo isticmaalaa kuwaas oo daboolaya hawlo badan oo dhulka ah hal mar.
Hablaha kulul "Habanero": sifooyinka ugu muhiimsan iyo sharciyada loogu talagalay basbaaska sii kordhaya
Sidee loo abaabulaa quudinta dhadhanka si loo helo natiijo wanaagsan?
Sidee loo gooyaa lafa-gurka xajmiga ah
Dhamaan dadka ku saabsan digaagga ee digaagga Cadaan cadaan ah: sharaxaad, faa'iido iyo qasaaro
Maxaa go'aaminaya waqtiga loo beerto dabocase digaagga? Markaad ku beeri karto gobollo kala duwan oo Russia ah?
Roman Franchuk, Agaasimaha Waxsoosaarka Beeraha ee LNZ Group, ayaa sheegay in mustaqbalka dhow sida dalagyada gaarka ah sida gabbaldayaha, hadhuudhka, iyo soodhaha ay ku jiri doonaan baahi weyn. Corn waxa ay xajisaa caanbiyaddeeda ugu weyn, maadaama ay tahay "boqoradda beertu", taas oo bixisa waxsoosaarka ugu sarreeya sannad walba, oo aan ka dhicin ciidda. Read More
Dhamaan sababta aan u rabo toon - waxaan fahamsanahay waxa jidhku ka maqan yahay
Cudurka strawberry "Roxana": sharaxaad, beerista iyo cayayaanka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ciid 2019